Ndakashandisa aMule zvakare makore gumi gare gare. Izvi ndizvo zvandakawana | Linux Addicts
Ndakashandisa aMule zvakare makore gumi gare gare. Izvi ndizvo zvairatidzika kwandiri
Kufambira mberi kweruzivo rwemichina kunoita kuti munhu amire kushandisa zvirongwa zvaimbove zvisingadzivisiki. WinZip (Mumazuva eWindows) yekuisa pamwechete zvidimbu zvefaira rakatorwa mucyber cafe uye rakachengetwa mumadisikitsi akawanda, k3b kugadzira iyo yekumisikidza yeimwe distro uye, hongu, aMule.
Nekukurumbira makore mashoma apfuura emapuratifomu akadai seAmazon, Spotify neNetflix, piracy yemabhuku, mimhanzi, mafirimu uye nhepfenyuro, yakadzikira zvakanyanya kana kushandurwa.. Panzvimbo pekugovana kusingatenderwe kwemufirimu kana zvakatevedzana zvakawanikwa kubva mubhaisikopo kana tambo TV, dzakarekodhwa kubva pachikuva. Zvakare kugovera mapassword kana kuwana kuburikidza neVPN kubva kunyika uko Netflix isina kushanda, yakava kurongeka kwezuva.
1 Kuyerera kuneta
2 Ndakashandisa Mure zvakare. Ndakarangarira chandaive ndamira
3 Chii chinonzi Mule?
Nekudaro, kuverenga nekuchenjerera kwemasocial network kunoita sekuburitsa maitiro asiri makuru panguva ino, asi ari kukura. Kusiiwa kwemavhidhiyo ekutepfenyura mapuratifomu uye kudzoka kudhawunirodha maapplication.
Pane zvikonzero zvakawanda zveizvi. Kutanga, kuwandisa kwemapuratifomu. Kuwedzera kune epasi rese akadai seNetflix, Amazon, Disney +, Star +, HBO +, Paramount + uye Pluto TV, kune mamwe ane kushomeka kwenzvimbo kana akanangwa pane zvakati wandei.
Nekudaro, kana isu tichizotenda Mutemo waPareto, Isu tinongoona 20% yezviri mukati 80% yenguva yatinoshandisa pamapuratifomu. Zvave zvichiratidzwa kuti kufarira kunodzikira kana ukaona zvinopfuura zvitsauko zvishanu zvakatevedzana munhevedzano. Uye, nezvikonzero zvekodzero, akatevedzana nemafirimu anotifarira anoguma anyangarika mushure memwedzi mishoma.
Kupatsanurwa kwemapuratifomu akasiyana kunoita kuti vashuvire zvitsva zvemukati. Zvemukati izvo zvisingawanzo kuratidzwa nemhando yayo. Ndinogona kutaura semuenzaniso nyaya mbiri dzandinoziva nekuda kwenzvimbo yepedyo. Umambo (Netflix) uye Maradona mutsara (Amazon) Muchiitiko chekutanga kutsoropodza akanongedza kuti kusarura kwezvematongerwo enyika kwevanyori vezvinyorwa kwakapfuura kufarira kwerondedzero. Muchidimbu, kubata chechokwadi pasina kururamiswa panzira dzeterevhizheni.
Pasi rose, iyo Fear Street trilogy, kuchinjirwa kwebasa reiyo isingakuvadzi RL Stine, yakaunza mufaro wakawanda. Hazvina kucherechedzwa kuti munhu akaipa aive mukomana murungu akazove mupurisa, mukomana akanaka musikana wechiAfro-dzinza rengochani uye ndivo vakanyanya kushungurudzwa nevaviri vakave mutengesi wezvinodhaka nekuda kweWild Capitalism.
Ndakashandisa Mure zvakare. Ndakarangarira chandaive ndamira
Kuverenga nezvekusagadzikana uku nemapuratifomu, ndinosangana nevashandisi vatsva veMule. Kunyangwe ndaitenda kuti purojekiti yakamiswa, zviri pachena kuti yakaramba ichishanda gore rino ichiburitsa yekutanga vhezheni kubva ku2016.Handichayeuki kuti ndakapedzisira riini kuzvinetsa kuiisa. Kunyangwe munguva yepamberi yeNetflix, BitTorrent yaive nezvakawanda zvemazuva ano uye yakatorwa nekukurumidza.
MuUbuntu repositories (Uye ini ndinofunga kuti muDebian Testing) pane yazvino vhezheni saka kuisirwa kwaisava dambudziko. Fedora inayo muFusion RPM repositories uye inogonawo kuiswa kubva kuArchLINux repositories.
Chii chinonzi Mule?
Iyo mutengi weED2K uye Kademlia faira kugovera network
ED2K iprotocol yekuchinjana faira (P2P) (Point-to-Point) umo sevha inoshanda semurevereri kubatanidza vatengi.. Mune mamwe mazwi, chinhu chekutanga chinoitwa nechirongwa ndechekubatana neserver. Iyo yekumisikidza yekumisikidza inosanganisira rondedzero yemaseva uye inogona kuwanikwa vamwe paInternet.
Kana zvangobudirira kubatana kune sevha, tinogona kushandisa chishandiso chekutsvaga, kungave munharaunda (sevha yakabatana) kana pasi rose (sevhavha ese), chero faira uye isu tichawana mibairo inoenderana nekutsvaga semhinduro.
Kana isu tatanga kurodha, aMule inobvunza sevha ruzivo rwekuti mafaera anotambirwa kupi. Sevha inopindura neIP kero dzevatengi vakaudza sevha kuti vane chaiyo faira.
Vatengi havafanirwe kuve nefaira rese kuti vatange kugovera. Pane shanduko yekuchinja uye, kana mutengi anokumbira asvika panzvimbo yepamusoro, mutengi ari kure anomutumira chikamu chefaira chinowanikwa kwaari. Zvakajairika kuti faira rimwechete rizare kubva kwakasiyana.
Kana vese vashandisi vane HighID (chiziviso chinopihwa zvichienderana nekubatanidza gadziriso) kuchinjirwa kuchaitwa zvakananga kubva kune mutengi kuenda kune mutengi, asi kana mumwe wevatengi aine LowID, kubatana kuchasimbiswa kuburikidza nesevha, sezvo LowID isingakwanisi kugamuchira. zvinopinda. Nekuda kweizvozvo, vatengi vaviri vane LowIDs havagone kubatana kune mumwe nemumwe.
Iyo Kademlia protocol inobvisa iyo yepakati sevha sezvo mumwe nemumwe wevatengi achitora zvikamu zvemabasa avo.
Chokwadi ndechekuti handifungi kuti yakakodzera kuisirwa. Iyo mushandisi interface inosarira kumashure, iyo gadziriso yacho ikati wandei (Nekusagadzika inochengetedza mafaera akatorwa mufolda yakavanzika uye ungangofanira kugadzirisa iyo Internet yekubatanidza nemawoko. BitTorrent inopa inoramba ichiwedzera kuwanda uye kurodha nekukurumidza. Kunyangwe nezvirongwa zvakaita sePopcorn-Nguva haufanirwe kumirira kuti kurodha kupedze. Mabhurawuza akaita seBrave anotova nemutengi akavakirwa mukati meiyi protocol.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Ndakashandisa aMule zvakare makore gumi gare gare. Izvi ndizvo zvairatidzika kwandiri
Ichi chinyorwa chakakomba here?
Kana kuti kutsamwa kwemwana akaparara?
Ndichakupomerai naamai vangu.
Chokwadi ndechokuti handigoni kuramba zvakawanda.
Kunyange chiri chokwadi kuti Amule inoda imwe gadziriso uye inononoka kupfuura rwizi, kabhuku kayo hombe kupfuura iyi uye kunyanya nezvinhu zvave nenguva iripo, haina mukwikwidzi.
Kana zviri zvekugadzirisa, kuvhura akati wandei pa router kunogona kunetsa, chokwadi, asi ndiudze kuti idambudziko kuti iyo default yekurodha dhawunirodha yakavanzwa, ndeye yamar lout anoiisa, kwete kuramba uchisarudza kwaunoenda. download.
Pamusoro pezvo, zvakavakirwa pakugovana, kusiyana nerukova, rwunonyanya kurodha pasi.
Inoshanda zvakanaka kwandiri, kuitira kuchengetedza ini ndinoishandisa chete nekad network, hazvifanirwe kushandisa maseva.
Asi munotii, vakakuwanepi sekuru? Ndinokuudza, emule kana amule, hongu zvakakodzera kuimisa, haina kufa zvachose, chokwadi emule yakatove neshanduro yenharaunda kwenguva uye vanoramba vachiburitsa shanduro nyowani sepakutanga, bycy uye iyo. inofamba sepfuti, hapana chakaoma kugadzirisa, inguva uye inguva yekutanga, nhasi hazvidiwi, kana kuvhura madoko, kana kuwana id yakakwirira, nekuda kwekubatana kwefiber kwatiinayo, emule kana amule, vanoenda kunge bara, kunyangwe nevpn, ini ndinoishandisa nevpn uye ine low id nguva dzose uye inoenda sepfuti. Parizvino muLinux emule pasi pewaini iri nani pane amule pachayo, kunyangwe vachangobva kuburitsa vhezheni. Mune emule kana amule, inoramba ichishanda sekurongeka kwezuva, injini yayo yekutsvaga inoshamisa kana kune zvakare mapeji ewebhu ane ed2k link, chimwe chinhu ndechekuti hauvazive, asi unowana marudzi ese ezvinyorwa, zvekare, super yekare uye super current. Ini ndinoshandisa emule pasi pewaini uye ndinowana zvese uye kana ndikatadza kuzviwana, pamwe pamwe kupfura kwerukova, asi nguva nenguva, nekuti ne emule une zvakawanda zvinokwana kune zvese. Iyo piracy yadonha nekuda kwekutenderera inhema dzakachena, nekuti ndizvo zvavanoda kuti vanhu vatende, asi zvinozoitika kuti kwete, nekutepfenyura kune piracy kupfuura nakare kose, nekuti zvese zvinoonekwa pane chero chikuva kutenderera, zuva rinotevera. yatovepo kurodha ne torrent kana nemanyurusi uye kana iri bhaisikopo rekutanga, unofanirwa kumirira kanenge mwedzi kuti uidhawunirodhe, chimwe chinhu ndechekuti hauzive kuti utore kupi uye sei, asi ZVINHU ZVOSE zviripo download, sezvazvagara zviri, hapana chakachinja, nekuti hauzive sei, hazvireve kuti ndizvo. Tsvaga zvishoma usati wataura zvisina maturo zvakadaro.
Ini handifunge zvakafanana, hongu zvakakodzera kuisa aMule, asi chete kana iwe uri mumwe munhu anofarira mafirimu uye hakusi kungoona achangoburwa ezvino (izvo zvinoshandawo kune izvozvo). Edza kudhawunirodha asiri matsva mafirimu pabittorrent wozondiudza.
Kunyange zvazvo, sezvaunotaura, kupa kweTorrent kwakanyanyisa, iyo AMULE network inoramba iri yakanakisisa yekuwana zvinhu zvisingawanzoitiki kana zvisingawanzoitiki, haina makwikwi. Kana dambudziko iri nguva yekurodha, usaite chikanganiso, hapana chichaitika kuti uone kana kunzwa zvawanga uchitsvaga maawa mashoma kana mazuva gare gare. Amule hombe.
Germán, titeerere uye edza Amule zvakare. Iwe uchaona kuti kupihwa kwemafaira kwakakura. Hongu, iyo GUI inopenga, inorembera dzimwe nguva, unofanirwa kuvhura madoko, inononoka kupfuura Torrent, nezvimwe, nezvimwe ... ... asi ine mafaera anoda kusvika mamirioni matatu.
Inoshanda here? Ehe
Pane 3 miriyoni mafaira here?… Hongu
Vane zvinhu zvausingawani muTorrents here? Ehe!!!!!
Ehe, iwe ndiwe muridzi wemaonero ako uye wakasununguka kuti usashandise.
Zvinoita sekuti pane zvatove zvataurwa nezvazvo, asi ini ndinozviwedzera: aMule chirongwa chikuru uye network yakabatana inobvumidza iwe kugovera zvinhu izvo mune mamwe manetwork zviri nyore * haapo *. Iwe unofanirwa kuchera zvakadzika nesoftware yakarebesa usati waita matairi kutonga pamusoro payo ...
Zvadaro, maonero erudyi-bapiro / maitiro ezvematongerwo enyika ndiyo pfuma yeumwe neumwe, asi anofanirwa kubviswa kana humwe hutongi hwehumhizha (kana humwe hunokosha) hunotarisirwa. Izvo hazvinei neMule, ed2k kana kademlia, kuti munyori wenoti fan wemapurisa echichena kana anovenga nhema dzengochani, nezvimwe ...
Tony Martin akadaro
Torrent downloads muSpain inoenda nekukurumidza, asi iri mumaoko emawebhusaiti mashoma anotambudzwa, kwete, zvinotevera, uye iwe unofanirwawo kupinda mawebhusaiti ne sutu yevarwere vanotapukira, nekuti vane zvese. Amule inoshanda zvishoma nezvishoma asi ine zvese, ini ndakaiisa pane raspberry uye inoshanda sebhaisikopo.
Pindura kuna Toni Martin
Ndinobvumirana nemashoko, ndinofunga kuti chinyorwa ichi chine urombo zvikuru. Sei uchinyorera chinyorwa nezve amule wobva wati kumagumo "Ini handizvikurudzire"?
Amule uye torrent maapplication akasiyana anokupa iwe nezvinhu zvakasiyana uye pane chinhu chakanaka, kuve neimwe nzira. Semuenzaniso, ini ndinoda kudhawunirodha nziyo dzega mu mp3, ndichishandisa amule yekutsvaga injini ndinoiwana uye nekuidhawunirodha mukubwaira kweziso, nerukova hazvigoneke.
Amule chishandiso chinobatsira uye chiri kushanda nhasi, kune mamwe madhawunirodha zvingave nani kushandisa torrent asi kune vamwe kwete.
Iyo nyowani vhezheni yeAlmaLinux 8.5 yakatoburitswa uye inouya neyakasiyana siyana